The Department of Engineering Chemistry is started in 1992 along with the establishment of the Mandalay Technological University, formerly known as Mandalay Institute of Technology. The science of “Chemistry” is an extremely broad subject, with implication from applications in the laboratory, industry, medicine, and agriculture, through innumerable uses in our daily lives, to the challenging intellectual exercise of making sense of suchawide subject. After thorough studying some ideas and ways in which “Chemistry” views the material world, apply these concepts to formaprosperous environment for every mankind.}
နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးတွင် သင်ကြားတတ်မြောက်ထားသော အဆင့်မြင့် ပညာများဖြင့် စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းရှိကာ ပြဿနာများကို အောင်မြင်စွာ ဖြေရှင်း နိုင်သော နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူတို့၏ အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ရန်ဆန္ဒရှိပြီး ဆောင်ရွက်နိုင် စွမ်းလည်းရှိသော အင်ဂျင်နီယာ၊ ဗိသုကာ နှင့် နည်းပညာ ကျောင်းသား ကောင်းများ ဖြစ်လာစေရန် အခြေခံအဆင့်မှ မွေးထုတ်ပေးရန် ဖြစ်သည်။ To produce capable and well trained engineers, architects, technologists and academicians who can successfully solve the problems by applying learned-studies with rational thinking based on knowledge of chemistry for public welfare and nation building.
အင်ဂျင်နီယာဓါတုဗေဒဌာနသည် မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ အရည်အသွေး မြင့်မားသော ကျောင်းသားများအား လူနှင့်လူ့ပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းကျိုးကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပြီး အရည်အချင်း ပြည့်ဝ၍ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသော ခေတ်မီဆန်းသစ် တီထွင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် အင်ဂျင်နီယာ၊ ဗိသုကာ နှင့် နည်းပညာရှင်ကောင်းများ ဖြစ်လာအောင်မွေးထုတ်ပေးရာ၌ အထောက်အကူပြု ဘာသာရပ် တစ်ခုအနေဖြင့် စနစ်တကျ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည့် ဌာနတစ်ခုဖြစ်လာစေရန် ရည်မှန်း ထားပါသည်။ To becomeadepartment of systematically helpful domain for producing high qualified and skilful engineers, architects, technologists and academicians with update creative power in contributing social welfare and environmental balance.